ओस्लो कारण यसको प्रसिद्ध गर्न सबैभन्दा यात्री बाल्टिन सूची मा छ झुकाव टावर, सान्ता मारिया Assunta र अन्य उल्लेखनीय साइटहरु गिरजाघर. तर शहर नै, विस्तृत र Arno नदी द्वारा विभाजित, यसको आफ्नै मा लायक एक दिन यात्रा हो! There areagood number of सानातिना संग्रहालयहरु जाँच गर्न, साथै उद्यान. को Palazzo ब्लू पनि महत्त्वपूर्ण आधुनिक कलाकारहरूको monographic प्रदर्शनियों धारण (Chagall, Miro र सबै भन्दा हाल टूलूस Lautrec). र अन्तिम mural कहिल्यै केथ Haring गरेको खोज बाहिर के, भनिन्छ Tuttomondo.
गाडिहरु द्वारा फ्लोरेन्स देखि लोकप्रिय दिन यात्राहरू एक सिएना छ. यसलाई आफ्नो Palio लागि प्रसिद्ध छ, जो एक घोडा दौड छ कि उत्तिकै प्रसिद्ध Piazza डेल Campo मार्फत रन. यो पनि यसको सुन्दर लागि जानिन्छ मध्ययुगीन वास्तुकला अन्य कुराहरू बीच. सिएना भरिएको एउटा प्राचीन शहर हो यूनेस्को विश्व विरासत साइटहरु र लायक एक यात्रा हो!
को Chianti क्षेत्रमा एक सानो शहर, Greve इतिहास धेरै संग एक लुकेका मणि छ, परम्परा, र रक्सी को प्रशस्त संस्कृति. Greve अन्वेषण र यसको कालिगढ पसलहरूमा वरिपरि टहलने गर्न फ्लोरेन्स देखि सिद्ध दिन यात्रा हो, क्याफे र कफी पसल. तपाईं एक तनावमुक्त दिन खोजिरहेको भने, Greve आफ्नो सही विकल्प हुन सक्छ.
Saturnia उत्तर मध्य इटाली टस्क्यानी मा एक स्पा शहर छ. आराम र खोलन बाहिर द्वीपसमूह गर्न सही गन्तव्य. थर्मल तातो पानीको पोखरी in Saturnia are sulfurous springs in the middle ofavalley and they are well known for their therapeutic properties, विश्राम भेटी र राम्रो सबै दिनमा विसर्जन मार्फत हुनुको.
तपाईं फ्लोरेन्स छन् भने किनभने तपाईं पुनर्जागरण कला प्रेम, माथि मारा अरेजो, एक घण्टा या त दूर रेल मा, एक फरक लागि दृष्टिकोण. Francesc पिएरो, जसको ड्यूक र रानी चित्रहरूले तपाईं Uffizi मा देख्न सक्नुहुन्छ Urbino को, सान फ्रान्सिस्को को यस शहर चर्च मा उच्च मण्डप चित्रित. यो जटिल फ्रेस्को चक्र, साँचो क्रस को कथा प्रतिनिधित्व, प्रारम्भिक Quattrocento सबैभन्दा प्रभावशाली मध्ये एक छ, जसमा कलाकार स्पेस आफ्नो maniacal विचार बाहिर काम (एक बिन्दु दृष्टिकोण आधारित), अन्डा आकारको टाउको निर्मल तथ्याङ्कले द्वारा आबादी.
हामी कसरी मा बन्द भेनिस छोड्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 10 फ्लोरेन्स रेल सूचीबाट दिन यात्राहरू? भेनिस सबैभन्दा रोमान्टिक मध्ये एक छ र लोकप्रिय गन्तव्यहरू इटाली. नहरहरुमा हजारौं सुविधा, महलों र गोथिक शैली भवन. भेनिस के तपाईं कहिल्यै देख्ने सबैभन्दा सुन्दर शहर को निश्चित एक लागि हो. हुनत यो भन्दा महंगी को एक हुन सक्छ. तपाईं एक मा छैनन् भने एक दिन यात्रा सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ तंग बजेट.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 फ्लोरेन्स रेल बाट दिन यात्राहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-from-florence/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Daytrips europetravel firenze Tranride ट्रैवलफ्लोरेन्स यात्रा TravelTuscany